क्रिस्टिना गुरुङ : जो बनिन् प्रेमगीत–३ का लागि 'गीत' ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
क्रिस्टिना गुरुङ : जो बनिन् प्रेमगीत–३ का लागि ‘गीत’ !
२०७६ असार १६ गते सोमवार
नेपाली कथानक चलचित्र ‘प्रेमगीत–३’ मा ‘गीत’ को भूमिकामा क्रिस्टिना गुरुङ खड्का छनोट भएकी छिन् । अमेरिकामा बस्दै आएकी क्रिस्टिनालाई निर्माण टिमले गीतको भूमिकाका लागि छनोट गरेको निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनले जानकारी दिए ।
क्रिस्टिनाले अब अभिनेता प्रदीप खड्कासँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्नेछिन् । निर्माण टिमका अनुसार प्लस टुसम्म नेपालमै अध्ययन सकेर अमेरिका गएकी उनी बाल्टिमोर युनिभर्सिटीमा आईटीमा स्नातक गर्दैछिन् । उनले केही म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छन् ।
चलचित्रमा प्रदीप र क्रिस्टिनासँगै शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, मनिष राउत, अनुभव रेग्मीलगायत कलाकारको पनि अभिनय रहनेछ । अनुभवले प्रदीप सानो हुँदाको क्यारेक्टर निभाउने छन् । चैत २८ मा रिलिज हुने ‘प्रेमगीत ३’ लाई छेतेन गुरुङ र निर्माता सन्तोष सेनले संयुक्तरुपमा निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्रको कथा छेतेन र मन्दिप गौतमले लेखेका हुन् ।